Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - Hawlaha
heerka dhibka: fudud , dhexdhexaad ah , adag , aad u adag
waxay ubaahantahay xisaab ( )
waxay ubaahantahay codeyn ( )
ururinta xogta ( )
mudnaanteyda ( )
[ , ] Cutubka dhexdiisa, aad ayaan ugu fiicnahay xaalada ka dib. Si kastaba ha ahaatee, tani mar walba ma hagaajin tayada qiyaasaha. Dhisaan xaalad ah qaab-dib-u-dhigid yareyn kara tayada qiyaasaha. (Si aad u aragto, fiiri Thomsen (1973) .)
[ , , ] U samee oo samee baaritaan aan horey loo ogaan karin oo ku saabsan Turkiga Amazon Mechanical si aad u weydiisatid lahaanshaha lahaanshaha iyo dabeecadaha xakamaynta qoryaha. Si aad u barbardhigi karto qiyaastaada kuwa ka soo jeeda saamiga suurtogalnimada, fadlan qoraalka su'aalaha iyo jawaabaha tooska ah si toos ah uga hel baaritaanka tayada sare sida kuwa ay maamusho Xarunta Cilmi baarista.
Mudo intee le'eg ayey sahanku qaadanaysaa? Immisa ayey ku kacaysaa? Sidee bay tirooyinka muusikada ee muunaddaada u barbardhigaan naqshadaha dadweynaha Mareykanka?
Waa maxay qiyaasta qashinka ee lahaanshaha hubka adiga oo isticmaalaya sambalkaaga?
Ku habboonow si aan loo baahneyn ee tusaalahaaga ah adigoo isticmaalaya qaab dib u dhigis ama farsamo kale. Hadda waa maxay qiyaasta lahaanshaha hubka?
Sidee qiyaasahaagu u barbardhigi karaa qiyaasta ugu dambeysa ee laga soo qaatay muunadda ku salaysan ee suurtogalka ah? Maxaad u maleyneysaa inay sharraxayso isdhaafka, haddii ay jiraan?
Ku celi su'aalaha (b) - (d) Mawduuca xakamaynta qoryaha. Sidee bay u kala duwan yihiin?
[ , , ] Geelle iyo asxaabteyda (2016) qabteen 49 su'aalood oo kala-doorasho ah oo laga soo xulay Baaritaanka Guud ee Bulshada (GSS) iyo inay sameeyaan baaritaan ay sameeyaan Xarunta Cilmi-baarista ee Pew Research si aan loo ogaan karin jawaabaha laga soo qaaday jawaabeyaasha laga soo qaaday Turkiga Amazon Mechanical. Waxay markaa dib u hagaajinayaan xogta aan la midka ahayn ee la adeegsanayo iyadoo la isticmaalayo qaab-dib-u-habeyn dib-u-habeyn ah oo la barbar dhigo qiyaasaha la isku-hagaajiyay ee leh kuwa ka soo jeeda GSS iyo saldhigyada Pew. Samee sahan isku mid ah oo ku saabsan Amazon Mechanical Turk iyo isku day inaad ku soo celiso shaxda 2a iyo sawirka 2b adigoo isbarbardhigaya qiyaasahaaga la isku hagaajiyay ee qiyaasaha wareegyada ugu dambeeyay ee GSS iyo Pew. (Fiiri qodobka A2 ee liiska 49 su'aalood.)
Isbarbardhig oo kala saar natiijooyinkaaga kuwa ka soo jeeda Pew iyo GSS.
Isbarbardhig oo ka soo horjeedda natiijooyinkaaga kuwa ka yimid sahaminta mashiinka Turkiga ee Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
[ , , ] Daraasado badan ayaa isticmaala talaabooyin isdaba-marin oo isticmaalaya taleefanka gacanta. Tani waa goob xiiso leh oo ay cilmi-baarayaashu isbarbar dhigi karaan dabeecadaha la soo gudbiyey oo ay la socdaan dabeecadaha la dhigo (fiiri tusaale, Boase and Ling (2013) ). Laba dabeecadood oo caadi ah oo ay ku waydiinayaan waxay soo wici karaan oo qoraya, iyo laba jeer wakhti caadi ah waa "shalay" iyo "toddobaadkii la soo dhaafay."
Ka hor intaadan ururin wax xog ah, waa kuwee tallaabooyinka is-sheegida ee aad is leedahay waa sax? Waa maxay sababta?
Isku qor shan ka mid ah saaxiibbadaada si aad ugu qortid sahankaaga. Fadlan si kooban u soo koobi sida shanta lamaanahaanba loo baaray. Maqnaansho nidaamkan tijaabada ah ee khuseeya qiyaasaha khaaska ah ee qiyaasahaaga?
Weydii su'aalaha microsurvey soo socda:
"Imisa jeer ayaad isticmaashay telefoonkaaga si aad u wacdid dad kale shalay?"
"Meeqo farriin qoraal ah ayaad dirtay shalay?"
"Imisa goor ayaad isticmaashay telefoonkaaga si aad ugu wacdid dadka kale toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey?"
"Intee jeer ayaad adeegsatay moobaylkaaga si aad u dirto ama u hesho fariimaha qoraalka / SMS toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey?"
Marka la dhamaystiro microsurvey this, weydiiso in ay hubiyaan macluumaadka isticmaalka sida ay ku diiwaan geliyeen telefoonkooda ama bixiyaha adeegga. Sidee loo adeegsadaa isbarbardhigga warbixinta is-weydaarsiga xogta? Waa kuwee ugu saxsan, taas oo ugu yaraan sax ah?
Hadda ku dar xogta aad ka soo ururisay xogta dadka kale ee fasalkaaga ah (haddii aad wax qabadkan u sameynayso fasalka). Iyada oo dataset weyn, qaybta ku celi (d).
[ , ] Schuman iyo Presser (1996) ku doodaya in amarrada su'aashu ay muhiim u yihiin laba nooc oo su'aalo ah: su'aalo qayb ahaan ah oo labada su'aaloodba ay yihiin heer isku mid ah (tusaale ahaan, qiimeynta laba murashax madaxweyne); iyo su'aalaha qayb ka mid ah oo su'aal guud ay soo socoto su'aal dheeraad ah (tusaale ahaan, weydii "Sidee ayaad ugu qanacsan tahay shaqadaada?" kadib "Sidee ayaad ugu qanacsan tahay noloshaada?").
Waxay kale oo tilmaamayaan laba nooc oo saameyn ku yeelashada su'aasha ah: saamaynta joogtada ahi waxay dhacdaa marka jawaabaha su'aasha dambe la soo dhaweeyo (intay ka duwanaan lahaayeen) kuwa la siiyey su'aasha hore; saameyn istiraatiji ah ayaa dhacaya marka ay jiraan farqi weyn oo u dhexeeya jawaabaha ilaa laba su'aalood.
Abuuri su'aalo qeyb ka mid ah oo aad u malaynayso inuu yeelan doono saameyn suáalo badan oo su'aasha ah; laba su'aalood oo dhan oo dhan oo aad u malaynayso inay yeelan doonto saameyn ballaaran; iyo dhowr su'aalood oo amarkooda aad u malaynayso inaysan waxba ka jirin. Samee tijaabo sahamineed oo ku saabsan Turkiga Amazon Mechanical si aad u tijaabiso su'aalahaaga.
Intee in le'eg saameyn qayb-qayb ah ayaad awood u yeelatey inaad abuurto? Miyuu ahaa saameyn ama isku dheelid kala duwan?
Intee in le'eg ayaa saameyn qayb-buuxda ah ayaad awood u yeelatey inaad abuurto? Miyuu ahaa saameyn ama isku dheelid kala duwan?
Ma jiraa saameyn su'aasha ah oo ku aadan labada qof ee aad u malaynayso in amarku uu muhiim u yahay?
[ , ] Dhismaha shaqada Schuman iyo Presser, Moore (2002) qeexayaa cabbir gooni ah oo ah saameynta su'aasha su'aasha: saameynta iyo saamaynta saamaynta. Inkasta oo saameyn kala duwanaansho iyo isweydaarsi loo sameeyay natiijada ka soo baxda qiimeynaha jawaabaha ee labada sheyba ee ku saabsan midba midka kale, saameyn ku yeelashada iyo saamaynta kala-shaandhaynta ayaa la soo saaraa marka jawaab-celiyeyaashu ay ka dhigaan kuwo xasaasi u ah qaab-dhismeedka weyn ee su'aalaha la soo bandhigay. Ka akhri Moore (2002) , ka dibna samee oo tijaabi tijaabada sahan ee MTurk si aad u muujiso saameyn ku yeelashada ama saamaynta.
[ , ] Christopher Antoun iyo asxaabtiisaba (2015) sameeyeen daraasad la barbardhigay shaybaarada sahlan ee laga helay afar nooc oo kala duwan oo qorista internetka ah: MTurk, Craigslist, Google AdWords iyo Facebook. Sameynta sahan sahlan oo kaqeybgalayaasha ka qaybgalayaasha ugu yaraan laba ilo oo internetka ah oo qoraya ilaha (ilahaasi waxay ka duwanaan karaan afar ilaha laga isticmaalo Antoun et al. (2015) ).
Isbarbardhig kharashka shaqaale kasta - marka la eego lacagta iyo waqtiga-u dhexeeya ilo kala duwan.
Isbarbardhig halbeegyada laga helay ilo kala duwan.
Isbarbardhig tayada xogta u dhaxeysa shaybaarka. Wixii fikrado ah oo ku saabsan sida loo cabbiri karo tayada xogta laga helay jawaab bixiyayaasha, fiiri Schober et al. (2015) .
Waa maxay ilaha aad doorbidayso? Waa maxay sababta?
[ ] Dadaal lagu doonayo in lagu saadaaliyo natiijooyinka 2016-ka Midowga yurub (ie, Brexit), YouGov-shirkad cilmi-baaris oo suuqa-internetka ah-waxay qabatay doorashooyin online ah oo ka kooban guddi qiyaastii 800,000 oo qof oo ka jawaabay Boqortooyada Ingiriiska.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan qaabka tirakoobka ee YouGov waxaad ka heli kartaa https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/. Si kastaba ha noqotee, YouGov ayaa qaybiyay codbixiyeyaasha noocyada kala duwan ee ku salaysan doorashooyinka guud ee doorashooyinka doorashooyinka guud, da'da, aqoonta, jinsiga, iyo taariikhda waraysiga, iyo sidoo kale goobaha ay ku nool yihiin. Marka hore, waxay isticmaaleen xogta laga soo ururiyey golaha Senigaanka si ay u qiyaasaan, kuwa ka mid ah kuwa codka bixiyay, saamiga dadka nooc kasta oo cod-bixiye ah oo doonaya inay codeeyaan. Waxay ku qiyaaseen kala-soocidda nooc kasta oo cod-bixiye ah iyada oo la adeegsanayo Daraasada Doorashooyinka Ingiriiska ee 2015 (BES), oo ah natiijada doorashada ka hor doorashada, taas oo ay ku ansaxiyeen codbixinta liiska doorashada. Ugu dambeyntii, waxay ku qiyaaseen tirada dadka ku jiray nooc kasta oo cod-bixiye ah ee ku yaala doorashooyinka, oo ku salaysan tirakoobkii ugu dambeeyay iyo Sahan-siinta Dadweynaha (oo leh macluumaad dheeraad ah oo laga helo ilo kale oo xog ah).
Saddex maalmood ka hor codbixinta, YouGov ayaa muujisay laba dhibcood hogaanka u ah Fasaxa. Habeenkii codbixinta, ra'yiururinta ayaa muujisay in natiijadu ay ahayd mid aad u dhaw in la waco (49/51 Remain). Daraasada ugu dambeysa ee maalintaas ayaa la saadaaliyay 48/52 iyadoo la jecel yahay joogitaanka (https://yougog.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Xaqiiqdii, qiyaasidan ayaa seegtay natiijada kama dambaysta ah (52/48 Leave) afar dhibcood.
Isticmaal habka qaldan ee qalabka sahanka ee looga hadlay cutubkan si loo qiimeeyo wixii qalad ah.
Jawaabta YouGov ka dib doorashadii (https://yougog.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) ayaa sharraxay: "Tani waxay u muuqataa inay tahay qayb ballaadhan sababtoo ah dadka soo-baxay-wax waxaannu idhaahnay in dhammaanteen ay noqon doonaan kuwo muhiim u ah natiijada sida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Qaabka nooca loo yaqaan 'Turnout' wuxuu ku salaysan yahay, haddii jawaab celiyayaashu ay u codeeyeen doorashadii ugu dambaysay iyo heer sare oo ka sarreeya doorashooyinka guud oo ka xanaajiyay qaabka, gaar ahaan waqooyiga. "Tani tani ma bedeshay jawaabtaada (a)?
[ , ] Qor jilid si aad u muujiso mid kasta oo ka mid ah qaladaadka matalaadda ee shaxda 3.2.
Abuuri xaalad halka qaladahan ay si dhab ah uga baxaan.
Samee xaalad khalad ah oo midba midka kali ah.
[ , ] Baaritaanka Blumenstock iyo asxaabta (2015) ku lug lahaa dhisida mashiinka wax lagu barto macaamiisha kuwaas oo isticmaali kara xogta raadinta digital si loo saadaaliyo jawaabaha sahanka. Hadda, waxaad isku dayeysaa inaad isku tijaabiso isla qodobada kale. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) ogaadeen in Facebook jecel karo saadaalinta sifooyinka shakhsi ahaaneed iyo sifooyinka. Waxaa la yaab leh, saadaashan waxay noqon kartaa mid sax ah marka loo eego kuwa asxaabta iyo saaxiibada (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Ka akhri Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , iyo soo rogista shaxanka 2. Xogta waxay ku jiraan http://mypersonality.org/
Hada, tirada sheyga 3aad.
Ugu dambeyntii, tijaabi tusaalahooda xogtaada Facebook: http://applymagicsauce.com/. Sidee buu u shaqeynayaa?
[ ] Toole et al. (2015) loo isticmaali jiray diiwaanada faahfaahinta faahfaahinta (CDRs) ee taleefannada gacanta si loo saadaaliyo isbeddellada shaqo la'aanta.
Isbarbardhig oo kala duwo naqshadeynta daraasadda ee Toole et al. (2015) leh Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Miyaad u maleyneysaa in CDRs ay tahay inay bedelaan sahaminta dhaqameedyada, iyaga oo dhammeystiraya ama aan loo isticmaalin dhammaan siyaasadaha samafalka ee dawlada si ay ula socdaan shaqo la'aanta? Waa maxay sababta?
Caddeyn noocee ah ayaa kugu dhihi karta in CDRs ay gabi ahaanba bedeli karaan tallaabooyinka dhaqameed ee heerka shaqo la'aanta?